Iza “Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be”? | Manatòna An’Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bicol Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
‘Nipetraka Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be’
MILAZA ny Baiboly fa “tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana.” (Jaona 1:18) Tena mahatalanjona izy ka tsy misy zavaboary nofo aman-dra afaka mahita azy ary mbola ho velona ihany. (Eksodosy 33:20) Nataon’i Jehovah nahita ny tany an-danitra tao anaty fahitana anefa ny lehilahy sasany. Anisan’ireny i Daniela mpaminany. Azo antoka fa nahatonga azy hanaja bebe kokoa an’i Jehovah ny zavatra hitany. * Ho toy izany koa isika raha mandinika an’izany.—Vakio ny Daniela 7:9, 10.
“Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be.” I Daniela irery no niantso an’i Jehovah tamin’izany anarana izany. (Daniela 7:9, 13, 22) Midika izany hoe efa ela niainana izy. “Mpanjakan’ny mandrakizay” izy ka tsy nanam-piandohana sady tsy hanam-piafarana. (1 Timoty 1:17; Joda 25) Manome toky antsika izany fa tsy misy fetrany ny fahendreny, satria milaza ny Baiboly fa manam-pahendrena ny be taona. (Joba 12:12) Marina fa voafetra ihany ny zavatra takatry ny saintsika ka sarotra amintsika ny hahatakatra hoe velona mandrakizay Andriamanitra. (Romanina 11:33, 34) Tsy midika anefa izany hoe tsy hahafantatra na inona na inona momba azy mihitsy isika.
Nahoana Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be no “nipetraka”? Miresaka hoe “Fitsarana” sy hoe “nahazo rariny” ny teny manodidina. (Daniela 7:10, 22, 26) Nipetraka mba hitsara àry i Jehovah tao amin’ilay fahitana. Iza no hotsarainy? Ny fanjakana eto an-tany. Nampitahaina tamin’ny biby izy ireo tao amin’ilay fahitana hitan’i Daniela talohan’izay. * (Daniela 7:1-8) Mpitsara manao ahoana anefa i Jehovah?
“Fotsy mangatsakatsaka ny fitafiany, ary toy ny volonondry madio ny volon-dohany.” Mariky ny fanaovana ny rariny sy fahadiovana ny hoe fotsy. Fotsy ny volon’ny ondry sasany. Tsy maintsy fotsy àry ny volon-dohany matoa nampitovina tamin’ny volonondry. Azonao sary an-tsaina ve ny zavatra hitan’i Daniela? Nahita mpitsara fotsy volo izy ary nanao akanjo fotsy botsiaka angamba izy io. Manome toky antsika izany fa manao ny rariny i Jehovah rehefa mitsara ary tena manam-pahendrena izy. Mpitsara tena mendrika ny hohajaina sy hatokisana izy.
Mpitsara tena mendrika ny hohajaina sy hatokisana izy
“Arivoarivo no nanompo azy, ary iray alina ampitomboina iray alina no nijoro teo anatrehany.” Iza ireo mpanompo any an-danitra ireo? Milaza ny Baiboly fa ‘mpanompon’Andriamanitra’ ny anjely. (Salamo 104:4) Revo “manatanteraka ny baikony” sy “manao ny sitrapony” izy ireo, ary mety ho an-jatony tapitrisa ny isany. (Salamo 103:20, 21) Voalamin’i Jehovah sy voabaikony tsara izy ireo nandritra ny taona maro, na dia tena be dia be aza. I Jehovah irery no mahavita an’izany, ka hita hoe tsy misy fetrany tokoa ny fahendreny.
Lasa matoky an’i Jehovah, Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be, isika rehefa mandinika ny fahitan’i Daniela. Manao ny rariny izy rehefa mitsara ary azo atokisana satria manam-pahendrena. Nahoana àry raha mianatra bebe kokoa ny fomba ifandraisana amin’io Andriamanitra faran’izay hendry io?
FAMAKIANA BAIBOLY AMIN’NY OKTOBRA:
Daniela 4-12–Hosea 1-14
^ feh. 3 Tsy tena nahita maso an’Andriamanitra i Daniela. Nataon’Andriamanitra toy ny tena izy mihitsy anefa ny sary tao an-tsainy. Rehefa nitantara ny zavatra hitany àry i Daniela, dia nampiasa sarin-teny mampiseho an’Andriamanitra ho toy ny olona. Tsy tokony horaisina ara-bakiteny anefa izy ireny, satria natao hanampiana antsika hahatakatra ny momba an’Andriamanitra fotsiny.
^ feh. 5 Manazava an’io fahitan’i Daniela io ny toko 9 ao amin’ny boky Diniho ny Faminanian’i Daniela!, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hizara Hizara ‘Nipetraka Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be’
w12 1/10 p. 18